Physical Exercises – စာမကျြနှာ5– Healthy Life Journal
မေး။ ။ သွေးတိုးရောဂါရှိရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပြုလုပ်လို့မရဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပြုလုပ်သင့်သလဲဆရာ။ သက်မွန်ခင်၊ သင်္ဃန်းကျွန်း။ ပါမောက္ခဦးကိုကို(ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့အခါ ပုံမှန်အားကစား လုပ်တယ်ဆိုရင် သွေးတိုးကကျတောင်ကျနေပါလိမ့်မယ်။ သွေးတိုးရှိရင် လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်...
နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတိုင်း ရရှိသည့် ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုများ
၊ လရိပ်မေ ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ထင်သလောက် ခက်ခဲတဲ့အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အစပိုင်းမှာ အချိန်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ရင်း မလုပ်ရင်းနဲ့ မလုပ်ဖြစ်တာပါ။ လေ့လာမှုအရ နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရင် သင့်ကို ကျန်းမာပြီး...
အိပ်ရာမထဘဲ လုပ်နိုင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်း ခြောက်မျိုး
လရိပ်မေ ကိုယ်အလေးချိန်အပိုလျော့ကျပြီး ကြွက်သားသန်စွမ်းစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းအများအပြား ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများစုက အားကစားခန်းမကို သွားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မှ ပိုအကျိုးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ အဲဒီအခါ လုပ်ဖြစ်ဖို့ ခက်သွားပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်စေဖို့ အိပ်ရာမထဘဲ လုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့အခါ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းပြီး...
ကိုယ်ဟန်အနေအထားကောင်းမွန်စေမည့် လေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ မျိုး
၊ လရိပ်မေ ၊ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကောင်းမွန်ဖို့က ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲလို့ မေးလာရင် ကြည့်ကောင်းစေလို့ အရေးကြီးတာဖြစ်ကြောင်း ဖြေရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဟန်အနေအထားကောင်းမွန်တဲ့အခါ ခါးသန်စွမ်းကျန်းမာပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အထိုင်များတဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ခါးနောက်ကျော ပျော့ပျောင်းသန်စွမ်းစေဖို့နဲ့ ကိုယ်ဟန်အနေအထား ကောင်းမွန်စေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို မှန်မှန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။...
တစ်နေ့လုံး ထိုင်ရသူတို့ လုပ်သင့်သည့် အကြောဆွဲဆန့်လေ့ကျင့်ခန်း
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ခန့်မှန်းချက်အရ အမေရိကန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းက တစ်နေ့မှာ ၆ နာရီကနေ ၁၃ နာရီ အထိ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အိမ်ပြန်လာပြီးရင်လည်း ညဘက် တီဗီထိုင်ကြည့်တဲ့ သူကများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ...
လရိပ်မေ တစ်ကိုယ်လုံး ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီး နေထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ ကျင့်စဉ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) မတ်မတ်ရပ်ပါ ပေါင်ဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ လက်နှစ်ဖက်ချပြီး လက်ဖ၀ါးတွေကို ရှေ့ဘက်ဖြန့်ထားပါ။ ဒီအနေအထားမှာ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်းပေးပါ။ (၂) လက်မြှောက်ပါ အသက်ရှူသွင်းရင်း လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းအထက်မြှောက်လိုက်ပါ။ (၃)...
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တိုင်း ထိရောက်မှု ရှိလိုလျှင် . . .
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ပိုမို ထိရောက်မှုရှိပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရရှိစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁) စိမ်းလန်းသော ရှုခင်းကိုကြည့်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ စိမ်းလန်းတဲ့နေရာမှာ အချိန်ငါးမိနစ်လောက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားစိတ်တို့ကို...
ဘီကီနီဝတ်တိုင်း ကြည့်ကောင်းသော ကိုယ်လုံးအလှပိုင်ရှင် ဖြစ်စေမည့် လေ့ကျင့်ခန်း
လရိပ်မေ ဘီကီနီဝတ်တိုင်း ကြည့်ကောင်းတဲ့ ခြေတံနဲ့ ပေါင်တံအလှပိုင်ဆိုင်စေဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းသုံးခု ရှိပါတယ်။ အဆင့် (၁) မတ်မတ်ရပ်ပါ လက်နှစ်ဖက်က ခါးထောက်ပြီး မတ်မတ်ရပ်ပါ။ အဆင့် (၂) ခါးထောက်ပြီး တစ်ဝက်ထိုင်ပါ အဲဒီအနေအထားအတိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ကို ရှေ့ဘက်ကိုင်းကာ တစ်ဝက်ထိုင်ပါ။...
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်နဲ့ အစားအသောက် စားသောက်ချိန် ဘယ်လောက်ခြားသင့်သလဲ . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး။ ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတာနဲ့ ရေသောက်တာ၊ အစာစားတာက မသင့်တော်ဘူးလို့ကြားဖူးလို့ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ချိန်နဲ့အစားအသောက်စားသောက် ချိန်ဘယ်လောက် ခြားသင့်ပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန်မှာ ရေနည်းနည်းသောက်လို့ရပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး သိပ်မောနေချိန်မှာ ရေခဲရေသောက်တာထက် အခန်းအပူချိန်မှာရှိတဲ့...